Ku samee Money Online Blog
Tababarka bilaashka ah - Ku iibso wax alaab ah ama adeeg internet ah ama ku-meelgaar ah
Markii aan bilaabay suuq-geynta internetka ee 1998 wax waliba waa mid cusub oo cidna dhab ma oga waxa ay sameynayeen, waxaa jiray caawinaad aad u yar ama tababar ah oo la heli karo - maanta waxaa jira faahfaahin aad u fara badan halkaas!
Waxaan go'aansaday in aan abuuro tababar ah 'dhaadhaca' hoosta macluumaadka oo idil Tilmaamaha gaaban iyo talaabooyinka waxqabadka, sida wax kasta oo adduunka ah waxaa jira marwalba hab dhaqsi ah oo si toos ah u shaqeynaya.
Waxaan ballan-qaadayaa inaan waxyaalahan ugu hayo sida ugu dhakhsaha badan uguna hoggaamiyo jihada saxda ah si loo abuuro 2nd dakhliga (wakhti qayb ahaan), iyo haddii aad rabto inaad sameyso dakhliga labaad ee dakhligaaga hoose, samee sida automated sida ugu macquulsan.
Qaybtaada waa inaad tallaabo tallaabo ku qaadato taladaygayga, ha iska deynin - ha joogteeyo, bilaabi kartid oo kobciso sida waafaqsan shuruudahaaga iyo astaamahaaga.
OK Halkan waxaan tagnaa! (Ku qor faahfaahintaada hoose)